China Powder Metallurgy Machining Equipment orinasa sy mpanamboatra | Welfine
Fe, Cu, firaka FeCu, vy stainliee, grafit
1) ao anatiny 3-70mm, afaka araka ny fangatahanao ihany koa
fonosana anatiny: kitapo plastika
fonosana ivelany: baoritra, paleta
Manaova serivisy maharitra sy maharitra
Ny fiakarana avo lenta dia mety ho amin'ny enta-mavesatra be, fampiharana haingam-pandeha haingam-pandeha ary oscillating
Fananana fitarihana hafanana tsara
Azo ampiasaina amin'ny tontolo maloto sy manimba
Ny tabataba dia kely noho ny fitondra hafa
Mety amin'ny enta-mavesatra avo lenta
Azo ampiharina amin'ny maripana marobe
Fanoherana tsara harafesina
Fandeferana mahazatra ny savaivony G7
Fandeferana mahazatra ny savaivony ivelany S7
Ampirisiho ny fandeferana amin'ny zana-kazo f7 / g6
Ampirisiho ny fandeferana amin'ny trano H7
Ny metallurgy vovoka dia vita amin'ny vovoka vy sy vovo-dronono antifriction hafa noterena, voadio, plastika ary nalona. Izy io dia manana firafitra porous. Aorian'ny fidiran'ny menaka mafana dia feno menaka manosotra ny pores. Amin'ny dingan'ny fiasana, ny vy sy ny diloilo dia hafanaina sy mivelatra, ary ny menaka dia voahidy avy ao amin'ny mason-koditra. Voahosotra ny velaran'ny fikororohana. Aorian'ny fampangatsiahana ny fiterahana, aondrahana ao anaty mason-koditra indray ny menaka.
Ny bearings metallurgy vovoka dia tsy azo nohosorana mandritra ny fotoana maharitra.
Ny poria avo kokoa an'ny metallurgy bearings dia mihabe ny fitahirizana solika, fa arakaraky ny pores kosa no mampihena ny tanjaka.
Ny bearings toy izany dia matetika amin'ny fanjakana mihosotra mifangaro, indraindray mety mamorona fanosotra sarimihetsika manify. Matetika izy ireo dia ampiasaina hanampiana ny enta-mavesatra sarotra sy maivana ary ny hafainganam-pandehan'ny menaka fanosorana.
Arakaraka ny toe-piainan'ny asa samy hafa dia voafantina ny metallurgy bearings miaraka amin'ny votoatin'ny menaka samihafa. Rehefa lehibe ny atin'ny solika dia azo ampiasaina tsy misy menaka fanosotra fanampiny sy entana ambany. Ny atin'ny solika dia azo ampiasaina ambanin'ny enta-mavesatra sy ny hafainganam-pandeha. Ny metallurgy mitondra pôrnôgrafika mitondra grafit dia afaka manatsara ny fiarovana ny fitaterana noho ny hamandoan'ny grafita. Ny fatiantoka dia ny herin'ny ambany. Eo ambanin'ny toetry ny tsy fanenjehana, dia afaka mandinika ny fisafidianana ny vidiny ambany sy ny tanjaka. Ny metallurgy vita amin'ny vy vovoka manana diplaoma avo kokoa dia avo kokoa, saingy ny hamafin'ny vozon'ny zoro mifanitsy dia tokony hatsaraina araka ny tokony ho izy.
Previous: metallurgy vovoka amin'ny vy sy Base Bronze
Manaraka: menaka sinterter mitondra menaka mitondra fananahana
Masinina metalyurgie vovoka
Rotor metallurgy vovoka vita any Sina
Factory Mamokatra metallurgy vovoka Sintered Bush ...
fampiasa tsy ara-dalàna metallurgy fampiharana